Soo ogow shan waji maqaar oo waaweyn oo guryaha lagu sameeyo | Bezzia
Susana Garcia | 01/05/2021 20:00 | Quruxda, Alaabta quruxda
Haddii aan ka hadalno waji-soocyada dabiiciga ah iyo kuwa guryaha lagu sameeyo si loo daryeelo timaha, hadda waa waji-gabayaha waji-xidhka si loo hagaajiyo maqaarka wejiga ama jidhka guga. Kuwani maaskarada ayaa lagu dabaqi karaa meel kasta oo aan rabno aad ayey ugu fiican yihiin daryeelka maqaarka. Aan aragno sida loo abuuro qaar ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan maqaar kaamil ah oo aan ku xiran karno dharka guga.
ka maaskaro macmal ah ayaa lagu samayn karaa dhammaan noocyada maaddooyinkas. Waxaan ku nafaqeyn karnaa maqaarka siyaabo badan, iyadoo la adeegsanaayo waxa dabeecada ay na siiso si aan u hagaajino jirkeena. Noocyada noocan ah ee maaskaradu way fududahay in la sameeyo waana kuwo aad wax ku ool u ah maxaa yeelay waxaa lagu sameeyaa guriga iyagoo leh waxyaabo yar yar waxayna si weyn u wanaajiyaan wejiga waxyaabaha dabiiciga ah.
1 Maaskaro si aad ugu cusbooneysiiso maqaarka boorashka
2 Maaskarada maqaarka xasaasiga ah ee leh aloe vera
3 Maaskarada astringent ee liinta
4 Maaskaro maqaarka qalalan oo leh saliid saytuun ah
5 Maaskarada Exfoliating leh sonkor
Maaskaro si aad ugu cusbooneysiiso maqaarka boorashka
Boorashku waa walax u adeegta waxyaabo badan. Kaliya maahan cunno nafaqo sare leh oo loo isticmaalo cuntooyin badan, laakiin sidoo kale waxay wax weyn ku kordhisaa maqaarka. Ku boorashku wuxuu leeyahay xoog wax soo saarid ah oo dib u soo nooleeya maqaarka sababta oo ah isla waqtigaas ayay daryeeshaa waxayna ka caawisaa inay qoyaanka ku sii jiraan. Waxaad u isticmaali kartaa xoogaa malab ah si aad u qasto oo aad u hesho saameynta ugu fiican. Malabku wuxuu awood u leeyahay inuu qoyo maqaarka sidoo kale wuxuu la dagaallamaa dhibaatooyinka sida finanka. Waa laba waxyaalood oo si fudud loo isticmaali karo oo si fudud loo heli karo. Ku mari duugis khafiif ah oo maqaarka ah una daa labaatan daqiiqo si aad hadhow uga saarto.
Maaskarada maqaarka xasaasiga ah ee leh aloe vera
Aloe vera waa mid ka mid ah maaddooyinka dabiiciga ah ee aad sida ugu badan u isticmaali doontid haddii aad rabto inaad daryeesho maqaarkaaga, wax kastoo uu yahay. Waxaa si aad ah loogu talinayaa maqaarka ugu nugul maxaa yeelay way caawisaa qoyaan, ka dhig maqaarka mid jilicsan oo nadiif ah, dhammaantoodna ku jira hal maado. Waxay ku dajisaa maqaarka casaan xitaa waxaad u isticmaali kartaa qorrax kadib si aad u daryeesho maqaarkaaga qorraxda ka dib. Dhirta aloe ee dabiiciga ah waxaa laga helaa geedka, iyadoo la jarayo caleemaha lagana saarayo jelka ay ku dhex jiraan, laakiin waxaan si fudud uga iibsan karnaa dukaamada dhirta si aan ugu isticmaalno maqaarka. Waa maaskara oo dejisa maqaarka cas oo waraabiya.
Maaskarada astringent ee liinta
Maqaarka saliida leh ayaa leh dhibaatada sebum xad-dhaaf ah taas oo aakhirka dhalisa wasakh badan oo badan. Mid ka mid ah talaabooyinka ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan isku dayno inaan xakameyno saliida ku samaysan maqaarka. Taasi waa sababta maaskaro liin dhanaanta ay u fiican tahay. Waa lagu qasi karaa malab yar ama ukun cadaan ah, maadaama ay qoyaan yihiin laakiin saliid kuma darsadaan maqaarka. Liinta ayaa saameyn ku yeelan karta maqaarka haddii qorraxdu mar dambe na soo gaadho, sidaa awgeed waxa fiican in la isticmaalo maaskaradaas habeenkii.
Maaskaro maqaarka qalalan oo leh saliid saytuun ah
Saliida saytuunku waa mid joogto ka ah jikadayada iyo sidoo kale waa qayb nafaqo sare leh taas oo loo isticmaali karo wajiga wajiga. Waa mid aad u qoyan oo aan loo isticmaalin maqaarka saliida leh, laakiin waxay ku habboon tahay kuwa qalalan. Haddii maqaarkaagu qalalan yahay waxaad isticmaali kartaa xoogaa qaado oo saliid saytuun ah iyo ukumo cad si aad isugu qasto. Waxaad kuheli doontaa maqaar aad u fuuq badan oo dhalaalaya adiga oo isticmaalaya maaskaradaas.
Maaskarada Exfoliating leh sonkor
Sonkor, marka lagu daro in loo isticmaalo macmacaanka, waa xoq weyn. Haddii aad waxoogaa ku qasto qaado qaado oo saliid saytuun ah waxaad uheli doontaa maqaar-bixiye aad u weyn oo jir-dilaca ah. Waxaad u isticmaali kartaa oo keliya bushimaha ama wejiga. Duug oo nadiifi wejigaaga si joogto ah kadib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » 5 waji-maaskaro macmal ah si loo muujiyo maqaarkaaga guga